mi guriga Arkiifiyada - SmartMe
Dom » Gelitaannada lagu calaamadiyey "miyyo-guriga"
Codsiga Guriga ee Xiaomi wuxuu leeyahay mowduuc mugdi ah
mi, ma guriga, xiaomi, xiaomi guriga
Wax in badan lagaga hadlay gadaashiisa ayaa dhacay. Codsiga Guriga ee Xiaomi waxaa lagu hodmiyay mowduuc mugdi ah, oo runtii ay sugayeen adeegsadayaal badan! Muddo dheer ayaan sugeynay tan, ugu dambeyn ...
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa cusbooneysiinta barnaamijka Mi Home
hal-abuurnimo, ma guriga, xiaomi
Xiaomi waxay soo bandhigtay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka Mi Home. Cusboonaysiinta ayaa laga heli karaa dhowr maalmood aaladaha ay ku jiraan macruufka. Codsiga Mi Home 6.1.202 wuxuu leeyahay astaamo xiiso leh, sida lagu taliyay ...
Kettle cusub oo Xiaomi ayaa tusi doonta heerkulka shaashadda
xariif caqli badan, ma guriga, xiaomi
Dhawaan, waxaan maqlay su'aasha dhowr jeer, goormuu noqon doonaa xirmooyinka Xiaomi cusub? Xiaomi waxay ku qasbanayd inay soo xajiso oo ay sii daayaan shey kale. Mijia Thermostat Pro waa guuleystaha timirta sumadda leh. Isbedelka ugu weyn marka la barbar dhigo kuwii ka horeeyey ayaa ah qaab dhismeedka lagu dhisay, ...
Nidaamka iswada ee tooska ah ee loo yaqaan 'Xiaomi Mi Air purifier 3H'
Waxa daabacay	Michal
miir nadiifiyaha hawada 2, miir nadiifiyaha hawada 2s, miir nadiifiyaha hawada 3, miir nadiifiyaha hawada 3h, ma guriga, nadiifiyaha hawada, xiaomi, xiaomi guriga, caafimaadka
Bilowga dhibaatada Sannadkii 2017-kii, websaydhka smartairfilters.com wuxuu tilmaamay in sifaynta hawadu ay heerka wasakhaynta ka ilaalinayaan inay ka sarreeyaan sidii ay ku talisay hay'adda WHO. WHO waxay ku talisay qiyamka: Celcelis maalinle ah: PM2.5 <25 μg / m3, PM10 <...
Apple HomeKit, Casharrada
Automate Aqara Hub sida Button argagaxa!
aqara hub, Homekit, ma guriga, ciriiriyo gaagaaban, xiaomi
Anigoo fiirinaya wararka saxaafadda shalay, waxaan ka helay hage aad u xiiso badan HomeKit News. Waxay muujisay sida loo beddelo 'Aqara Hub' badhanka argagaxa. Marka sidee baa loo isticmaali karaa amar yar oo Siri ...
Laba dariiqo oo loogu talagalay laba gobol Mi Home (Android)
ma guriga, xiaomi, codsi wax laga beddelay
Dad badani waxay isweydiinayaan sida loo maamulo laba gobol hal mar Mi Home (Polish iyo Shiinaha). Maqaalka, waxaan kuugu sharixi doonaa talaabo talaabo sida aad ugu maareyn karto aaladda labadoodaba ...